Tajikistan: Mpihira Mankalaza An’i Poutine Mahatonga Hatezerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2012 2:43 GMT
Kintana ety anaty aterineto ilay Tajik mpihira, Tolibjon Kurbonkhonov. An'aliny ireo olona efa nijery ireo lahatsariny telo nakarina ao amin'ny YouTube tamin'ity taona ity (jereo ery ambany), ary dia matetika izy izao no vahiny aminà fandaharana anaty fahitalavitra any Rosia.
Kanefa, na teo aza izany lazabe tampoka izany, tsy dia manana mpankafy betsaka manao ahoana ilay mpihira any Tajikistan. Ny ankabeazan'ireo olona nandre ny momba an'i Kurbonkhonov tany an-tanindrazany dia samy mihevitra azy ho “jester” mpanao hatsikana/saribakoly avokoa, na mitsara azy ho tsy alehany. Ny anton'izany rehetra izany dia noho ny hiran'ity mpanakanto tanora ity manindrahindra ny zava-bitan'ilay toa tsy mahery fo akory, ny filoha Rosiana Vladimir Poutine.
Hira malaza telo
Global Voices dia nitatitra mikasika ny lahatsary voalohan'i Kurbonkhonov, “V.V.P.” [ru] (Vladimir Vladimirovich Putin, anarana fenon'ny filoha Rosiana), izay nakariny tao amin'ny YouTube tamin'ny Febriary 2012 ary vetivety dia niparitaka be. Nivoaka tao amin'ny Aterineto iray volana teo eho eo nialoha ny fifidianana ho filoham-pirenena tao Rosia ary nanindrahindra an'i Putin, ilay kandidà fototra amin'izany toerana izany, ho toy ny “mpitondra tenin'Andriamanitra” sy “mpanavotra ny firenena,” ary dia lasa hiza malaza avy hatrany ilay hira.
Mahavariana, ilay lahatsary dia niteraka adihevitra marobe tao Rosia mikasika ny hoe tena fideràna an'i Poutine tokoa sa fanesoana azy izy io ?
Taorian'ny nandresen'i Poutine tamin'ny fifidianana, namokatra lahatsarin-kira iray hafa i Kurbonkhonov, “Thank You, God, for Vladimir” “Andriamanitra o, misaotra anao nanome an'i Poutine”[ru]. Ilay hira dia nilaza hoe ilay filoha Rosiana vaovao vao avy voafidy indray – “mahery fo” sy “filamatra” ho an'ilay mpihira – dia “olom-boafidin'ny lanitra”
Taminà fandaharana mivantana iray manana ny làzany tao amin'ny fantsom-pahitalavitra NTV ao Rosia, Kurbonkhonov dia nanambàra [ru] fa nanantena ny hihira ilay hira izy nandritra ny fanokanana an'i Poutine. Rehefa jerena ny lasany, ilay mpihira koa dia niteny fa nanao asanà mpivarotra fiara izy tany Tajikistan talohan'ny nandehanany nankany Rosia hikaroka asa tsaratsara kokoa. Tamin'ny fanazavany ny fiderany ny mpitarika an'i Rosia, naborany fa lasa olom-pirenena Rosiana izy hatramin'ny 2010.
Tamin'ny 6 Septambra, hira iray vaovao an'i Kurbonkhonov no nakarina tao amin'ny YouTube, efa nahazo mpitsidika maherin'ny 100.000 tao anatin'ny telo andro. Ilay hira vaovao, “Jobilin-karavoana, Atoa. Filoha” [ru], dia midera ny renin'i Poutine sy manentana ny Rosiana hankalaza ny faha-50 taonan'ny filoha amin'ny 7 Oktobra. Any akaikin'ny faran'ilay hira (2:28), mitanisa i Kurbonkhonov hoe , “Ry namana malàla isany, ny fanajàna ny mpitarika ny firenena dia midika fanajana ny Renin'i Rosia. Hajao araka izay azonareo atao izy. Hajao izy, ry Rosia.”
Fanehoan-kevitra any Tajikistan
Ireo mpikirakira Aterineto ao Tajikistan dia vàka saina amin'ireo hira roa voalohan'ity mpiray tanindrazana amin-dry zareo ity. Na dia nisarika fanehoan-kevitra tsy dia tsara loatra amin'ny fiteny Tajik ao amin'ny YouTube aza ireo lahatsary, dia difotra tanteraka ihany izy ireny ao anatin'ireo fanehoan-kevitra an-jatony maro amin'ny fiteny Rosiana. Kanefa ireo fanehoan-kevitra amin'ilay lahatsary farany indrindra dia maneho fa marobe ireo olona ao amin'ny firenena no tezitra amin'izay raisin-dry zareo ho “fisolelafàna” sy “tsy fahampiana fitiavan-tanindrazana” ao amin'ilay mpihira.
Amin'ny fitondràna fanamarihana eo ambanin'ny tati-baovao iray ao amin'ny TopTJ.com mikasika ny hira farany navoakan'i Kurbonkhonov, nanoratra i “Kayfalon” [ru] hoe :
Tokony hosintonin'i Tajikistan aminy ny maha-olom-pirenena azy!!! Aleo izy hijanona any Rosia any. [Olona tsy manjary] manome henatra ny Tajiks izy.
i “KFRN” nanampy hoe [ru]:
Ireo Rosiana samy zareo avy ao Rosia rahateo aza tsy tia an'i Poutine. Alaivo sary an-tsaina anie amin'izao fotoana e, ny mba fihevitry ry zareo Rosiana ny Tajiks rehefa mijery ity lahatsary ity ry zareo…
Ao amin'ny “Platforma”, vondrona Tajiks goavana indrindra ao amin'ny Facebook, Abdumannon Sheraliev nanolotra an'ity [ru] :
Soso-kevitro ny hoe hanaovan'ny manampahefana an'i Tolibjon Kurbonkhonov ho olona tsy irina sy voaràra, sy hisintonana ny maha-olom-pirenena azy ary tsy hamelàna azy hiditra eto amin'ny firenena. Azo leferina ihany raha mpisolelaka manindrahindra ny [mpitarika] antsika fara-faharatsiny, saingy izy kosa nanao izay hahamenatra an'i Tajikistan manontolo.
Anatin'ireo fanehoan-kevitra an-katezerana mitosaka, Jasur Ashurov nanolo-kevitra [ru] hoe tsy tokony ho raisina ho matotra loatra izay nambaran'ilay mpihira :
Izao izany e, tsy fantatro. Any Rosia, heverin'ny olona ho adala izy, tsy ampiana tsy analàna. Avelao izy hihira. Ny alika vaviko aza mba mivovo foana eo ambany varavarankeliko eo mandritra ny alina – fa tsy manao izay mampietry voninahitra olona izy an.
Raha mbola manohy miady hevitra momba izay sazy mety ho ampiharina amin'ny “fisolelahan'i” Kurbonkhonov any Rosia ireo mpampiasa Facebook, Ashurov manome [ru] soso-kevitra iray hafa:
Tokony hambara azy, amin'ny fomba mihaja, fa kaondrana lery. Ohatra, afaka mametraka loka ety anaty Aterineto isika ho an'izay “jester mpanao hatsikan'ny Taona”, ary atolotra ho an'i [Kurbonkhonov] ilay loka, amin'ny sokajy rehetra.
13 ora izayKazakhstan
15 ora izayKyrgyzstan